Poteto | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | September 2019
Esi egbochi ma merie ụfụ nke poteto
Ọgwụgwụ (ma ọ bụ ire ere ire ere) bụ ọrịa kachasị mma nke kụrụ n'ubi, gụnyere poteto. Onye na-ebute ọrịa ahụ bụ ọrịa. N'isiokwu a, ị ga-amụta ihe kpatara njedebe bọta nke poteto na usoro nchịkwa dị ugbu a jiri ọrịa a. Ihe na-akpata oge blight nke poteto Ihe kpatara oganihu nke mbubreyo nke poteto jikọtara ya na pathogen a na - akpọ oomycete, bụ nke na - abụ nke dị ka mkpụrụ osisi.
Esi emeso Colorado nduku ebe ndị mmadụ na-eme ihe
Colorado nduku ebe bụ ihe otiti nke ọtụtụ ezumike okpomọkụ. Mgbe ụfọdụ, o siri ike ịchekwa nduku sitere na pesti a. Ogwu ahụ na-eme ka ọgwụ na-egbu egbu, na-amụba ngwa ngwa na na oge nke ụbọchị, na-ebibi elu nke nduku, si otú ahụ belata ya mkpụrụ. Ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere Colorado nduku ebe na ọgụ megide ya site na ndiife ịgba akwụkwọ.
Esi tufuo Colorado nduku ebe na mọstad na mmanya
Ebe ugwu Colorado na-ebute ebe dị iche iche bụ ụmụ ahụhụ nke sitere na ezinụlọ nke akwukwo ahihia, ebe obibi nke ezi akwụkwọ. N'ihe 1824, Thomas Sayem, bụ onye na-enyocha ihe banyere ọrịa, chọpụtara na ọ bụ otu n'ime pests ndị kasị dị ize ndụ nke ihe ọkụkụ na-akụ ndụ. Ugbu a, ọ bụghị nanị ọgwụ ụmụ ahụhụ na-alụ ọgụ n'ebe ahụ, kamakwa ọgwụ ndi mmadu maka Colorado nduku ebe enwewo mmuta buru ibu.
Obodo Colorado (Leptinotarsa ​​decemlineata) sitere na akwukwo ebe ezinyere ezinụlọ, usoro ogbe. Nke a bụ otu n'ime pests kachasị njọ nke ogige na ogige nri, na-eweta mmebi dị njọ. Ị ma? Maka agba ya nke ụcha ojii ise na nke ọ bụla elytra abụọ, Colorado nduku ebe nwere aha ya, nke pụtara n'ụzọ nkịtị n'ụzọ iri na Latin.
Nkọwa, njirimara na njirimara nke iri nduku dị iche iche nke Kiwi
Di iche iche di iche iche nke Kiwi di iche iche bu otu n'ime ihe ndi mmadu na-achota, nke a na-achota site n'omume di iche iche nke mkpuru ihe ubi na nwube ogwu nke anu. A naghị ahụ ụdị dịgasị iche iche na ụlọ ahịa na n'elu ụlọ CIS, n'ihi ya, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-amaghị ya. Ka o sina dị, ọtụtụ ndị agronomists hụrụ Kiwi poteto maka nhụjuanya ya na nkà na ugbo na oke mkpụrụ.
Atụmatụ nke iji ọgwụ "Taboo" maka nhazi poteto
Onye ọ bụla na-elekọta ubi na-eche nsogbu dị otú ahụ ihu dị ka iri poteto site na Colorado nduku ebe, ma na-agbalị ịchọta ezigbo ọgwụgwọ ya iji lụọ ahụhụ a. Ahụmahụ na-egosi na nsi si na Colorado nduku ebe, esiri ya dịka "ntụziaka" nke ụlọ, anaghị eweta mmetụta a chọrọ, ya mere, ọtụtụ ugboro, ndị na-ahụ maka potato na-eji Taboo, bụ nke na-ejide ya.
Iwu maka potatoing poteto: mgbe ka spud poteto maka oge mbụ
Poteto bụ nri ụtọ nke ọtụtụ ndị. Otú ọ dị, ọ bụ mmadụ ole na ole maara kpọmkwem otú e si eto ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị ka o wee nwee ike ịba ụba. Ndi oru ugbo mara ihe mara uru oru di otua, ndi nmalite bu ndi choro ihe mere spud poteto na uzo esi eme ya. N'ezie, mkpa nke usoro a dị oke, ebe ọ bụ nanị na mgbe ị gachara, ị nwere ike nweta ezigbo nsonaazụ.
Esi na-eto eto nduku iche "Gala" n'ógbè ha
Mgbe ị na-ahọrọ ụdị nduku maka ịgha mkpụrụ gị, ọ dị mkpa ịṅa ntị na precocity, mkpụrụ, nlekọta nke nlekọta, iguzogide ọrịa, yana àgwà ọma nke osisi a ma ama.
Atụmatụ kachasị elu na-eto eto na Siberia
Siberia bụ ógbè buru ibu nke na-achịkwa ọnọdụ ihu igwe. Maka ugbo ugbo bu ebe di egwu. Inwe ezigbo owuwe ihe ubi na ọnọdụ siri ike bụ nsogbu. Ka o sina dị, ịgha mkpụrụ ma na-eto eto na Siberia na-eburu ebe dị oke mkpa na mmepe ugbo.
Osisi na-eto eto "Rozara": iwu maka ịkụ na ịchekwa
Poteto bụ ihe kachasị ewu ewu ma chọọ ihe oriri na mba anyị. Ọ dịghị ihe ọ bụla onye na-eri anaghị agụnye omenala a. E nwere ọtụtụ ụdị ọdịbendị a, mana nduku "Rosara" nwere mmeri. Ọ na-ejikọta uto na ihe oriri. Ụdị dịgasị iche iche a na-adịghị mma ma na-etolite n'ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe ọ bụla.
Olee otú esi emeso pests
Ọnụ ọgụgụ nke pests na ọrịa ndị nke nduku bụ nke kwesịrị ekwesị na ya ewu ewu. Onye ọ bụla na-elekọta ubi na-atụle ọtụtụ ihe dị iche iche na-emebi ihe na-emepụta ihe ma na-enweta nnukwu ihe ọghọm na owuwe ihe ubi ha. Ya mere, onye na-eri poteto, otu esi emeso ụmụ ahụhụ na-emerụ ahụ ma nọgide na-egbochi mwakpo ha - gụọ banyere ya n'ihu na isiokwu ahụ.
Ụzọ nke na-emeso ọrịa nduku
Ụfọdụ ndị na-elekọta ubi, iji zere ihe ndị na-akpata ihe ọkụkụ sitere na ọrịa ndị na-esi na potato, na-akụ ihe ọkụkụ na-emepụta na kọmpụta, akpa na n'okpuru hay. Ma, n'oge na-adịghị anya, ha kwenyesiri ike na ọ naghị azọpụta tubers sitere na nje bacteria, nsị na nje ndị na-akpata ọrịa dị iche iche. Они беспощадно поражают здоровые растения и их плоды в открытом грунте, теплице и даже в погребе.
Anyị na-alụ ọgụ na blight na poteto
Na mgbakwunye na pests, ọrịa ndị ọrịa na-arịa ọrịa dị iche iche. Ụfọdụ ọgwụgwọ na-emewanye nke ọma n'ime afọ ole na ole gara aga, nke a na-akpata nchegbu n'etiti ndị ọrụ ubi. Ka ọ dị ugbu a, ọ dịghị ihe kpatara ụjọ - ọ bụrụ na ị maara otú phytophthora si egosipụta na poteto na otu esi alụ ọgụ, ị nwere ike ịchekwa ihe ubi ahụ.
Ụdị na-emepụta Irbit n'ụlọ gị
Kedu ihe bụ "potato Irbitsky", ihe ndị dị na ya, nkọwa na njirimara nke dịgasị iche iche, yana foto na nyocha - ndị a bụ ozi bara uru nke ga-aba uru maka onye na-amanye amateur na-achọ ịmalite ihe oriri a na atụmatụ nke aka ha. Ihe omume na nkọwa nke dịgasị iche iche Nduku "Irbitsky" bụ ihe dị iche iche dị iche iche maka ịba ụba n'ubi ihe ubi.
Akuku nduku dị iche iche: n'oge, na-arụ ọrụ, na-amị mkpụrụ
A na-eji obi ụtọ akpọ "Ụda Mma" a maka na ọ na-eme ka mgbalị ndị ọkà mmụta sayensị nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkọta Pomato aha nke a na-akpọ. A. G. Lorkha iji weta ụdị nri a dị iche iche. The potato "Luck" bụ ihe ọtụtụ agronomists, ndị bi n'oge okpomọkụ na naanị ndị na-egwu potato na-ahọrọ onwe ha, na ọ bụ ya na anyị ga-etinye anyị isiokwu na ị ga-ahụ nkọwa zuru ezu nke dịgasị iche iche na foto, àgwà na onye na-atụle reviews.
Kedu ka esi eto nduku na akpa?
Taa, ọtụtụ ụzọ na-eto eto a. Ozugbo o toghi eto: n'ụzọ omenala, na trenchi, na nsị. Mana enwere uzo di iche - na - eto eto na akpa. Uru na ọghọm nke usoro Ụzọ kachasị mma bụ ịchekwa ohere n'ime ogige.
Poteto "Queen Anne": na-amị mkpụrụ ma na-akwụsi ike
Onye obula nke akwukwo nri choro inweta uzo di iche iche na-acho ugbo, nke a na-echebe site na nje na microbial pathogens, nakwa dika nke a na-acho n'uzo anyi di iche iche ma na-enye ndi ozo akwukwo nri di nma. Ndị a na-azụlite Germany, bụ ndị, mgbe ha gbasiri mbọ ike na nnwale, gosipụtara ọchịchọ ndị a, na-enye ụwa dị iche iche poteto, Queen Anne.
Akuku ma na-elekọta nduku iche Adretta
Enweghị ụlọ okpomọkụ n'oge zuru ezu n'enweghị nduku. Anyị na-eji ihe oriri a eme ihe maka nri ọtụtụ efere, a na-ahụkarị ya na tebụl. N'okwu ahụ, anyị ga-agwa gị ihe nduku Adretta na-enye, kọwaa nkọwa dịgasị iche iche, chee foto na nyocha ya. Ihe omume na nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche "Adretta" pụtara ihe dị ka afọ 20 gara aga n'ihi ọrụ nke ndị ọrụ Germany.
Poteto "Blue": àgwà varietal na njirimara nke ịkọ ihe
Nhọrọ nke poteto maka ịkụ ihe na mba ma ọ bụ nkata bụ ihe dị oké mkpa, n'ihi na ụdị dịgasị iche iche bụ isi maka owuwe ihe ubi. Taa, ọtụtụ ihe dị iche iche nke ihe oriri a dị iche iche, ha nile dị iche na ibe ha na-atọ ụtọ, agba, nha na àgwà ndị ọzọ. "Blue" dịgasị iche iche emeela ka ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-ewu ewu n'ihi na ọ dị mfe n'ịgha mkpụrụ, ihe ngosi mara mma na uto dị mma nke tubers.
Ụzọ mgbochi nke iguzogide skaab
Poteto - nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu, nke ọtụtụ akwụkwọ nri na-ahụ n'anya, nke a pụrụ ịchọta onye ọ bụla nọ n'ubi ahụ. Mana, dịka omenala ndị ọzọ, a na-ekpughe ya na ọrịa ndị na-emebi ọdịdị ya ma wedata ya. Ihe kachasịsịsị n'ime ndị a bụ skaab. Ọzọ, anyị ga-amụtakwu banyere skaab na poteto: ya na foto ya, nkọwa na usoro ọgwụgwọ, na ihe ị ga-eme iji gbochie ya.
Anyị na-eme onwe anyị ịgha ogige ahụ
Osisi Plantain buru ibu: uru bara uru na owuwe ihe ubi n'ulo
Kedu ka esi eto lemon balm lemon n'ụlọ na na saịtị ahụ? Ntu ahihia na ilekọta ya
Kaadị azụmahịa nke saịtị gị - nsu
Kedu ihe bụ ọrịa nke karọt dị ize ndụ, otu esi amata ya ma kpochapụ ọrịa ahụ?
Otu esi esi na-eto eto ma ọ bụ na-eto eto "paradaịs Paradaịs" (farbitis, kvamoklit)
Early owuwe ihe ubi maka ndị maara ihe gardeners - Minerva poteto: nkọwa nke iche na foto
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Poteto